Olee Otú Anyị Jiri anyị Onyinye maka Chineke? — njem Lee - Official Site
Olee Otú Anyị Jiri anyị Onyinye maka Chineke?
Nke a bụ ozi dị mkpirikpi si Advance College Conference na Raleigh, NC. Ị nwere ike gụọ ihe odide ahụ n'okpuru ebe a:
Achọrọ m gwa gị okwu nnọọ nkenke banyere iji anyị onyinye n'ihi ebube nke Jesus.
Ò nwetụla mgbe ị nụrụ ụmụaka ịjụ ajụjụ? Ha nwere ihe dị ịtụnanya ọchịchọ ịmata na-eyi ka ọ ọgwụgwụ. Na kpokọtara ajụjụ “ya mere” nwere ike iso awa na awa. M nwere enyi bụ ndị bụ ụmụaka nọ a na ogbo ugbu. Ọfọn, o yiri ka e nwere ihe a obere nwa na mkpụrụ obi m na-enwe mmasị ịjụ ihe mere, ma ọ bụghị ihe nkịtị ajụjụ, ọ bụ banyere adị kwa ụbọchị ihe.
M na ọ bụghị nnọọ mfe kpaliri. E nwere ụfọdụ ndị na-ndammana chụpụrụ, na eziokwu ahụ bụ na ọ dị mkpa ka nam bụ ezuru mkpali maka ha. My nwunye bụ otu n'ime ndị; M na-.
Ka m na-enweta ihe ọ bụla ime eme, M mkpa n'echiche nke na m na-eme ihe magburu. "Ma ọ bụrụ na m na-a ahịhịa si, ga ahịhịa nwoke zọpụta?"M na a chebara ihe Ihọd, na m na-adịkarịghị adọta nkọwa ma ọ bụ tedious ihe aga-eme. O di nwute na, nkọwa na tedious aga-eme bụ na ọtụtụ ndị na ndụ n'ezie. Nke a bụ eleghị anya ihe mere m jisiri nke ukwuu n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọbụna mgbe m ghọrọ a Christian. My ná mgbakọ na mwepụ ọmụmụ yiri na-abaghị uru na oru omume dị ya ka a n'efu nke oge m.
M maara na ọ bụghị m naanị otu na ike okụt ya ike-akpali mgbe ụfọdụ. Anyị niile nwere ndị na izu ebe ọ na-ele ka a na-agwụcha okirikiri nke blah. Mgbe ụfọdụ anyị na-achọkwa nanị na-ahụ nnukwu ihe, ma ihe niile nnukwu n'ihi na ihe niile bụ akụkụ nke nnukwu akụkọ. The nnukwu akụkọ na Chineke na-agwa onwe ya na ebube ya.
Nke a bụ ọbụna ezi anyị onyinye. Anyị nwere ike a nwaa-eche na anyị onyinye dị ka akụkụ nke agwa na akụkọ banyere onwe anyị. Dị ka ihe niile nke ndụ bụ obere malitegharịa nke na-eduga ndị ọzọ a na-masịrị anyị. Mgbe kama niile nke ndụ bụ a isi na nnukwu akụkọ ebube Chineke.
Gị onyinye na-enwere na-enyere agwa nnukwu akụkọ.
Ọ bụ ihe niile banyere ebube nke Chineke
M na-echeta mgbe m malitere iche ihe nile otú a. Amalitere m rapping mgbe m bụ n'ezie-eto eto, na ihe nile m rapped banyere bụ m onwe. Mgbe ahụ ka m ghọtara na ihe niile dị n'ebe ahụ n'ihi na ebube Chineke, ọ bụghị ebube Njem. Nke a bụ otu n'ime ụzọ n'ezie messed m.
15 Ọ bụ onyinyo nke-adịghị ahụ anya Chineke, ọkpara nile e kere eke. 16 N'ihi na site na ya ihe niile e kere, dị n'eluigwe na n'elu ụwa, -ahụ anya na-adịghị ahụ anya, ma ocheeze ma ọ bụ ọchichi ma ọ bụ achị achị ma ọ ọchịchị-ihe nile e kere site n'aka ya nakwa maka ya.
Ndị Kọlọsi 1:15-16
M n'anya otú anya Paul bụ na Jizọs kere ihe niile. Ọ dịghị ahapụ ihe ọ bụla si. Ihe na ala na nke bi n'eluigwe, ihe ị pụrụ ịhụ na ihe ndị ị na-apụghị ịhụ, eze na ndi-isi nke ụdị dị iche iche, ọbụna ikike mmụọ na ikike. Mgbe e mesịrị n'akwụkwọ (na n'ebe ndị ọzọ) Paul na-ezo aka mmụọ ọjọọ dị ka ndị ọchịchị ma ọ bụ ikike. Ọ na a gwa ha na-Chineke kere ma n'ihi na Chineke. Ọma ma ọ bụrụ na ọbụna ndị mmụọ ọjọọ e kere site Jesus, n'ihi na Jesus, mgbe ahụ n'ezie anyị onyinye bụ.
Chineke kere ihe niile o nwere ikike n'ebe ọ.
Otu n'ime iche ihe banyere ikike Chineke nwere bụ na ọ dịghị mgbe nyefee ya. Eze rigota ọzọ dị ka onye nketa. Oche na-hoputara. Cops na-azụ ma nye a baajị. Chineke bụ nanị ya bụ Onye bụ isi mgbe nile dị adị.
Ọ na-na-na onye ọzọ ọrụ. Ọ na-azụ ya. Ọ bụghị ndị nwere iji ruo eru maka ya. Ọ dịghị mgbe e hoputara, na ọ ga-dịghị mgbe a ga impeached. Kee ihe ndị n'ihi nọ n'okpuru ikike ya na-eji ya ezi nzube.
Ya mere, Chineke Ò bu n'uche inwe ebube dị nnọọ site na akụkụ nke ndụ gị, ma site na ihe nile nke ọ.
Gị onyinye Chineke kere na otu nzube, na-agwa akụkọ nke ebube-Ya.
Mgbe m ịzụta ngwá ụlọ si IKEA, M ama mara ihe abụọ: 1, a ga-eleghị anya-ada iche n'afọ ọzọ. na 2, e na-aga na-nzà nke iberibe na ntụziaka n'ime.
Ọ gaghị abụ ihe ogbi ma ọ bụrụ na m weere ụfọdụ n'ime ndị na kposara na e bu n'uche maka a bookshelf na-eji ha maka ihe ọzọ? Ha na-e nyere m, n'ihi na a purpose- si osisi osisi na kposara na tools- na ha bụ akụkụ nke iwuli na shelf. The onyinye nke ọ bụla otu onye nwere bụ ngwaọrụ gị ịkọ akụkọ toolbox. Kpọmkwem nyere kọọ akụkọ banyere Chineke otuto. Ha na-adị na-ewetara Chineke otuto.
Mmadụ pụrụ ịsị, ihe banyere m ezie na? Gịnị banyere onwe m mmezu? M chọrọ ịbụ oké. Ọfọn kasị ukwuu ọrụ ị nwere ike mgbe igwu egwu, bụ a ọrụ na chebara ihe. Na Chineke akpọwo anyị nile na-abụ otu akụkụ.
Ma olee otú anyị ga-esi na ebe anyị na-eji anyị onyinye iji nye Chineke otuto? Anyị na-adịghị niile eme nke a n'ụzọ zuru okè.
-Ada na ịhụnanya na ebube Chineke
Ihe bụ nsogbu bụ na anyị na-adịghị ahụ ebube Chineke dị ka ihe dị oké ọnụ ahịa na-alụ ọgụ nakwa ibi maka. Na ọ bụ n'ihi na anyị na-adịghị ahụ Chineke dị ka ebube ezu. Mgbe ị na-amalite ịghọta otú nnukwu Chineke bụ, ị ga-amalite ịmata ihe mere Eluigwe na Ala ebute Ya na Ya naanị.
Mgbe ị na-agụ Isaiah 40 ị na-ahụ na-agbalị ime ka ebube-Ya onwe gị ma ọ bụ onye ọzọ bụ ihe ọ bụla na-erughị ohi. Ọ bụ nke ya na o tosiri ya!
M ga-agba gị ume ịgụ ndị na-akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị bụ ebe ndị mmadụ na-etu ọnụ banyere Chineke. Isaiah 40. N'ekpere Hana bụ na 2 Samuel 2. Moses song mgbe ha na-aga site Oké Osimiri Uhie. Psalm 135.
Ruo mgbe ị na-ekechi ebube Chineke, ị gaghị elekọta iji gị onyinye Ya.
Mgbe ụfọdụ, ọ bụ ike iche echiche banyere otú iji gị onyinye maka ebube Chineke n'ihi na ọ bụghị mgbe niile otú doro anya. Ọ bụ ihe doro anya mgbe ị na-yiri ka nwere doro anya na-ekwu okwu onyinye ma ọ bụ ihe yiri ime mmụọ. Ma ọ bụ ọbụna na nkà. Ma ọ bụghị dị ka doro anya mgbe gị onyinye ka ihe ga ochichi ma ọ bụ ile ọbịa.
Paul na-enye anyị ụfọdụ clues n'ebe ndị ọzọ na Ndị Kọlọsi. Gee ntị n'ihe ọ na-ekwu na Ndị Kọlọsi 3.
23 Ihe ọ bụla ị na-eme, -arụ ọrụ eji obi, dị ka n'ihi na Jehova na ọ bụghị ndị mmadụ, 24 ebe ọ maara na site na Jehova ị ga-enweta ihe nketa dị ka ụgwọ ọrụ unu. Ị na-efe Jehova Christ.
Ndị Kọlọsi 3:23-24
Paul bụghị n'okpuru echiche na administrative onyinye, ma ọ bụ onyinye iji nyere ụmụaka aka, ma ọ bụ onyinye dị nnọọ ime a maka ọrụ nke ọma apụghị-eji n'ihi na ebube Jesus. E nwere atọ mfe ajụjụ anyị pụrụ ịjụ onwe anyị dabeere na ihe ọ na-ekwu
Olee otú i kwesịrị ịrụ ọrụ? Anyị kwesịrị "na-arụ ọrụ eji obi"
Anyị nwere ike ịdị gị ka ọrụ lazily. Karịsịa na ihe ebe na njikọ aka Chineke otuto, ọ dịghị ka o doo anya. Ma Pọl na-ekwu ọrụ eji obi ma ọ bụ na ihe nile nke obi gị. Anyị kwesịrị ịrụ ọrụ iji ezi obi na ịdị uchu
2. Ònye ka unu na-arụ ọrụ maka? Ị na-arụ ọrụ maka Jesus.
Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike a nwaa ịrụsi ọrụ ike, ma na-eme ya n'ihi ihe ọjọọ ndị mmadụ. Ime anyị onyeisi ma ọ bụ nne na nna anyị ma ọ bụ na-arụkọ ọrụ. Ezie na anyị na-enwe ọchịchị-ayi, anyị na-emecha na-arụ ọrụ na-atọ Chineke ụtọ bụghị ha. Anyị na-apụghị irite ịhụnanya ya, ma anyị nwere ike ịtụkwasị ya obi ma na-ewetara ya obi ụtọ site n'ịsọpụrụ ya.
3. Gịnị ka ị ga-enweta? Ihe nketa gị dị ka ị na-agọzi
Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike ịdị gị ka ọbụna n'ọrụ maka Jesus, ma na-eche echiche ahụhụ dịịrị m, Ana m arụ ọrụ maka ihe ọ bụla. Nke ahụ bụ na-ezighị ezi! Ị na-arụ ọrụ na-atọ Chineke ụtọ, ị zara ya. Na ga-agọzi anyị n'ihi na anyị ọrụ, Chineke amara. Ya amara akwali anyị ịrụ ọrụ obi na ọ na-agọzi anyị maka ọrụ ọ na-eme na anyị. A paycheck bụghị iji wulite ndụ gị gburugburu, ma ebighi-enweta ụgwọ ọrụ na-.
N'iji ụkpụrụ nye Chineke otuto
Ị chọpụtatụwo otú anyị atụmatụ maka ihe anyị na-n'ezie ekechi?
Ahụwo m nke a nke m ndụ na e ikpe site na ya. A bụ otu ihe atụ. M nọ a hụrụ snịịka. Na ụfọdụ ugboro m nwere ike ina kwa ekechi ya. Ya mere, a izu ole na ole gara aga, anyị nwere ohere na-aga a oké sneaker ụlọ ahịa anyị ka anyị nọ n'obodo ọzọ ma m niile obi ụtọ banyere ya. Na mgbe ahụ, ọ anya dị ka ya agaghị arụ ọrụ si.
M freaked si na-aga site a mfịna ime ka ọ na-eme. M nọ na-akpọ na-eche echiche banyere na-agbanwe agbanwe flights, etc. Ma mgbe ahụ, m kwụsịrị ma jụrụ onwe m, "Gịnị mere?"N'ihi na m na-ekechi ya.
O yiri ka anyị na atụmatụ maka ihe na anyị hụrụ. Anyị na-ahụ ụzọ mee ka eme. Na mgbe ị hụrụ n'anya otuto Chineke ị na-ahụ ụzọ iji bụla nook na cranny nke ndụ gị n'ihi na ọ. Ọ bụ ọnụ ahịa ya.
My ndụmọdụ bụ nke a: Chase Jesus na-ada na ịhụnanya na ya ruo mgbe ị na-ahụ ihe niile dị ka ohere ịkọrọ ndị mmadụ banyere Ya.
Emeteria • December 18, 2014 na 2:33 pm • zaghachi
Amen! M mkpa ịnụ a taa. Daalụ!
Keshia • December 18, 2014 na 2:34 pm • zaghachi
Gordie Tamayo • December 18, 2014 na 2:54 pm • zaghachi
Daalụ maka na-ekere òkè. Nke a na e mkpa nke ukwuu na iwere obi-. G
Cameron • December 18, 2014 na 8:36 pm • zaghachi
n'ezie, m na-ebute ụzọ ná ndụ m na e-etinye n'ime n'ọnọdụ si agụ ihe a…… Mgbe ụfọdụ m na-eche na-erughị mezuo na-arụ ọrụ m na-akpọ ime…..nke mere na nnọọ onyinye Chineke agọziwo m na m ọtụtụ mgbe agbasaghị imebi…..otú m imebi na nkowa nke na-arụ ọrụ Chineke kpọrọ m ka m na-eme ma chụpụ Ịhụnanya Ya na mkpụrụ obi nzube nke m ọrụ na-echefu na ọ bụ n'ihi Ebube Ya na Otuto naanị ihe mere m na-eme na m……#blesstobecallforpurpose #
wetara Kaputula • December 20, 2014 na 4:37 Abụ • zaghachi
Deep bro.am ume
Michael • December 22, 2014 na 3:11 Abụ • zaghachi
'Chase Jesus na-ada na ịhụnanya na ya ruo mgbe ị na-ahụ ihe niile dị ka ohere iji gwa ndị mmadụ banyere Ya.’
Ike ịchọta ụzọ ka mma nke otú a pụrụ ikwu. Always egwu.
Chris • January 8, 2015 na 12:23 pm • zaghachi
Great isiokwu dị egwu. Ọ gbara m ume ma na-echetara m ihe ụfọdụ dị mkpa ụkpụrụ. WTF mere na ọ bụ otú ahụ dị mkpa iji nọgide na-agụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ dị uchu, na Bible mgbe niile ọhụrụ uche anyị. Na dị ka okwu na-aga, “ma ọ bụrụ na ị na-adịghị eji ya, ị hapụ ya”. Ọ dị mkpa ime ihe anyị na-amụta site na akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-eme ka ọ a riri omume. ndọpụ uche, ịda mbà n'obi, siiri pụrụ iduga ogbenye àgwà mgbe meghị ọma, dapụtara ọzọ nsogbu. Chineke ụzọ bụ mgbe niile ụzọ kacha mma, Christlikeness bụ ụzọ nke udo na ọṅụ na-enye Chineke otuto.
Sammy Msiska • January 21, 2015 na 11:08 pm • zaghachi
Ị na-a ezigbo ihe nlereanya nke ndị ahụ na-eji ha onyinye ọ bụla iji nye Chineke otuto. Obi dị m ụtọ ịhụ ka ị na ọ bụghị naanị okwu ma na-eme ya. Ị na-akpali m njem…nọgide na-Glorifyin Chineke
TamekaBowen • March 2, 2015 na 5:21 pm • zaghachi
Ya mere dị ike. Ihe niile e n'ezie kere Jizọs na site Jesus. Gịnị mma ohere iji bulie ya gospel nke bụ mkpụrụ obi anyị nzube ahụ Kraịst!! Hallelujah ihe a dị ike ozi!! :-)
Leo • June 24, 2015 na 6:07 pm • zaghachi
M n'anya ya n'ihi-adị kwa ụbọchị m na-eme a obere nri na a ọtụtụ na-ezighị ezi, M na-asị na nke a ọtụtụ ma okwu gị nyere m olileanya maka mgbanwe. Anyị ekwesịghị ilekwasị anya n'ihe anyị na-eme nke ọma na nke a ga-enyere anyị mma
Leo • December 11, 2015 na 2:01 pm • zaghachi
unbelievable, Toonụ Chineke maka nkwusa a, O cheere anya nwere ike ịsụgharị gị videos n'ime Spanish, anyị ga-abụ nnọọ na-enye aka!